फ्रेवुअरी 23, 2019 अप्रील 12, 2019 साइन्स इन्फोटेक	6 Comments औषधि, डा. राम बहादुर बोहरा, बर्वेरिस वुलगेरिस
﻿डा. राम बहादुर बोहरा
बर्वेरिस वुलगेरिस औषधि पत्थर चट्टा अजम्बरीको पातबाट बनेको छ । हाम्रो देशमा यो औषधि प्रशस्त पाइन्छ । यो औषधिको Botanical Name नै Berberis Vulgaris हो । यो औषधिको सेवनले चाहे मिर्गौला (Kidney) को Stone होस वा पित्तथैली (Gall Baladder)को पत्थरी किन नहोस झार्दछ । हामीले सवैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मानिसलाई पत्थरी किन पर्छ र यसको ठोस कारण के हो ।
कुनै पनि औषधि होस वा पेयपदार्थ किन नहोस हामीले सेवन गर्नुपुर्व सोच्नुपर्छ । हाम्रो शरीरमा जब क्यालसियमको मात्रा बढ्न थाल्दछ त्यति बेला पत्थरी बन्न थाल्दछ । पत्थरी बन्नुमा सवै भन्दा ठूलो हात क्यालसियमको हो । क्यालसियमयुक्त खाना नखाएर औषधि सेवन गर्छौं भने ९९% पत्थरी १ देखि २ महिनामा यो औषधिले झार्दछ ।
रोग लाग्नुको पछि सवैभन्दा ठूलो हात खानपान र औषधिहो हामीले खाने औषधिबाट पनि पत्थरी जम्न सक्छ । प्रकृतिले हाम्रो शरीरमा आवश्यक क्यालसियम पैदा गराउदछ यदि आवश्यक भन्दा बढी कृतिम क्यालसियम हामीले खान्छौं भने पनि यसको असर हाम्रो (Kidney) र (Gall Baladder) मा पर्न जान थाल्दछ ।
स्वास्थ्य हाम्रो अमुल्य धन हो सानो गल्तीले ठूलो दु:खको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । आज मैले यो औषधिबाट पत्थरी झार्ने तरिकाबारे प्रकाश पार्नेछु । यो औषधि आयुर्बेदिक हर्बलबाट होम्योपैथीकले Mother Tincture तयार गरेर मार्केटमा पठाएको छ । यो औषधि १५ थोपा १/४ भाग पानीमा राखेर ३ पटक २,३ महिना सेवन गर्नुपर्नेछ । यो औषधि होम्योपैथीक फार्मेसिमा उपलब्ध छ ।
(औषधि सेवन गर्नुपुर्ब होम्योपैथीक डाक्टरसंग परामर्श लिन जरुरी छ)
← राबेप्रा (Rabeprazole Sodium 20 MG Capsule) र यसको प्रयोग
बाबुआमालाई सम्मान गर्ने गरौ नत्र होला पछुतो →
मे 19, 2019 मे 19, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
जनवरी 24, 2019 जनवरी 24, 2019 साइन्स इन्फोटेक 3
6 thoughts on “बर्वेरिस वुलगेरिस (Berberis Vulgaris ) Mother Tincture र यसको प्रयोग”
Pingback:कैल्केरिया फ्लोरिका (Calcarea Fluorica) र यसको प्रयोग
Pingback:दुखाई कम गर्ने औषधी निमेसुलाइड टेब्लेटको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
Pingback:प्रोप्रानोलोल मिनिल (Propranolol Minil) र यसको प्रयोग